ဒီကေန႔ အသက္(၅၄)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အလွူအျဖစ္ ဧရာဝတီစင္တာမွာ ေငြက်ပ္သိန္းႏွစ္ရာ လွူဒါန္းခဲ့တဲ့ ရန္ေအာင္ – ျမန္မာသတင္းစံု
Posted on December 14, 2020 Author admin	Comments Off on ဒီကေန႔ အသက္(၅၄)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အလွူအျဖစ္ ဧရာဝတီစင္တာမွာ ေငြက်ပ္သိန္းႏွစ္ရာ လွူဒါန္းခဲ့တဲ့ ရန္ေအာင္
ဒီကနေ့ အသက်(၅၄)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ဧရာဝတီစင်တာမှာ ငွေကျပ်သိန်းနှစ်ရာ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ရန်အောင်
ဧရာဝတီစင်တာ (ရန်ကုန်)အတွက် အကယ်ဒမီများရှင် ဦးရန်အောင်မှ (၅၄)နှစ်မြောက် မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ငွေကျပ်သိန်းနှစ်ရာ လှူဒါန်း။ဒီကနေ့ ကတော့ အကယ်ဒမီများရှင်ရန်အောင်ရဲ့ အသက် (၅၄) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရန်အောင်ကတော့ မွေးနေ့လေးမှာ ကိုဗစ်ကုသရေး ဧရာဝတီစင်တာကို အလှူငွေလှူဒါန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်းက အဓိက ပံ့ပိုးကူညီ ဦးဆောင်မှုဖြင့် COVID -19 လူနာများကို လက်ခံကုသပေးလျက်ရှိနေသည့် ဧရာဝတီစင်တာ (ရန်ကုန်)အတွက် အကယ်ဒမီများရှင် ဦးရန်အောင်မှ (၅၄)နှစ်မြောက် မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ငွေကျပ်သိန်းနှစ်ရာကို စေတနာထက်သန်စွာဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီလှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်းအတွက် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း အနေဖြင့် အထူးကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်းနှင့် စီးပွားဥစ္စာများ ဒီရေအလား တိုးပွား၍ အများအကျိုးအတွက် ဆတက်ထမ်းပိုး ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါသည်။ ပရိသတ်ကြီးကလဲ ဦးရန်လေးရဲ့အလှူအတွက် သာဓု ခေါ်ပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
ဧရာဝတီစင်တာ (ရန်ကုန်)အတွက် အကယ်ဒမီများရှင် ဦးရန်အောင်မှ (၅၄)နှစ်မြောက် မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ငွေကျပ်သိန်းနှစ်ရာ လှူဒါန်း။ဒီကနေ့ ကတော့ အကယ်ဒမီများရှင်ရန်အောင်ရဲ့ အသက် (၅၄) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရန်အောင်ကတော့ မွေးနေ့လေးမှာ ကိုဗစ်ကုသရေး ဧရာဝတီစင်တာကို အလှူငွေလှူဒါန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်းက အဓိက ပံ့ပိုးကူညီ ဦးဆောင်မှုဖြင့် COVID -19 လူနာများကို လက်ခံကုသပေးလျက်ရှိနေသည့် ဧရာဝတီစင်တာ (ရန်ကုန်)အတွက် အကယ်ဒမီများရှင် ဦးရန်အောင်မှ (၅၄)နှစ်မြောက် မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ငွေကျပ်သိန်းနှစ်ရာကို စေတနာထက်သန်စွာဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီလှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသည်
ယခုကဲ့သို့ ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်းအတွက် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း အနေဖြင့် အထူးကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်းနှင့် စီးပွားဥစ္စာများ ဒီရေအလား တိုးပွား၍ အများအကျိုးအတွက် ဆတက်ထမ်းပိုး ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါသည်။ ပရိသတ်ကြီးကလဲ ဦးရန်လေးရဲ့အလှူအတွက် သာဓု ခေါ်ပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့အောက်တိုဘာ(၂၂) ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်စမိုင်းလ်ရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုပြည့်မောင်ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပါ။ စမိုင်းလ်ကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့မွေးလအစကတည်းက အလှူအတန်းတွေ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ပေးခဲ့သလို ဒီနေ့မွေးနေ့ရက်လေးမှာလည်း စမိုင်းလ်အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်ရုံကိုပါ ဖွင့်လှစ်ရင်း သိန်းလေးဆယ်တန်ဖိုးရှိ ကံစမ်းမဲတွေ ဖောက်ပေးသွားဦးမှာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ.. ကိုပြည့်မောင်ကတော့ စမိုင်းလ်ကို တီဗွီကြော်ငြာလေးတစ်ခုကနေ ချစ်ခဲ့တာဖြစ်သလို ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့မိန်းကလေးကို အမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေအောင် ထားနိုင်သူတစ်ယောက်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ကိုပြည့်မောင်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးကိုတော့ Happy birthday ပါမောင်… ဘယ်တော့မှသူများလမ်းကြောင်းနောက်ကမလိုက် ကိုယ်တိုင်စွန့်စား မရမကလမ်းဖောက်ပြီး idea အသစ်တွေအမြဲတွေးတောပြီးဖန်တီးတတ်တဲ့ယောကျာ်း .. လွန်ခဲ့တဲ့ (၉) မြန်မာပြည်မှာဖုန်းခတွေတက်ဈေးတွေမြင့်နေတုန်းကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနိုင်ငံခြားကိုဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ခေါ်ဆိုလို့ရအောင် #Ytalk ဖုန်းကဒ်ကိုပထမဆုံးစွန့်စားတီထွင်ခဲ့သူ။ အခုလည်းရုပ်ရှင်လောကဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေချိန်တတ်နိုင်သလောက်တတ်စွမ်းတဲ့ပညာနဲ့လမ်းသစ်ဖောက်မယ့် ယောကျာ်း ဘုရားတရားလုပ်မယ်ဆိုနှစ်ခါမပြောရသူ…. အလှူအတန်းလက်မနှေးဘဲ အမြဲသူများအတွက်ဦးစားပေးသူ.. အမြဲလေးစားပြီးအားကိုးရတဲ့သူ…. မိန်းမမျက်နှာတစ်ချက်အပျက်မခံနိုင်သူ….. မိန်းမမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲ ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာခန့်မှန်းနိုင်သူ ( စောင့်အောင့်နေမှတော့ကြည့်စရာမလိုဘူးပေါ့ ) အရမ်းချစ်တယ် […]
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသားချောလေး ထွန်းကိုကိုကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်းကိုကိုက မင်းသားကြီးဦးကျော်သူရဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာလည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီး ပရဟိတအလုပ်တွေကို စွမ်းစွမ်းတမံလုပ်ဆောင်နေတာပါနော်။မင်းသားချောထွန်းကိုကိုကတော့ စိတ်သဘောထားပြည့်ဝပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နေထိုင်တတ်လို့ လူချစ်လူခင်ပေါများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလတ်တလောမှာဆိုရင်တော့ ဦးကျော်သူက အများအကျိုးကိုသယ်ပိုးဆောင်ရွက်နေရင်းကနေ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်သူကတော့ ဆေးကုသမှုခံယူဖို့အတွက် ဝေဘာဂီကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထွန်းကိုကိုကလည်း ဆရာနဲ့အတူလိုက်လာပြီး ဘေးကနေ အနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေတာကြောင့် အရမ်းစိတ်ချရပါတယ်နော်။ အခုဆိုရင်တော့ ဦးကျော်သူက”ကိုယ့်သူစစ် သူ့ဆရာဝန်စစ်ပြီ။ယနေ့ ရဲဘော်ရဲဘက်ကြီး ကိုထွန်းကိုကိုက ကျွန်တော့်အားဆီးချိုသွေးချိုစစ်ရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကာ ၊ ဆရာဝန်များကလည်း ကိုထွန်းကိုကိုအားလာရောက်၍ Swab testing လာရောက်ပြုလုပ်ပြီဖြစ်သည်။ကံကောင်းပါစေ …. ရဲဘော်ထွန်းကိုကို။” ဆိုပြီး ဆုတောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကတော့ ဘုရား၊တရားလည်းလုပ်ကြရင်း ကြံကြံခိုင်ခိုင် ရင်ဆိုင်နေတဲ့ပုံလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Source:Kyaw Thu’s Facebook Account Unicode […]
သရုပ်​ဆောင် ​ဗေလု၀ ​သေဆုံး​သွား​ကြောင်းသိရတယ်.